Lozam-pifamoivoizana mpanentana PCT - Vovonan'ny AASraw
Mpitsikilo entina amin'ny PCT isika, mpivarotra solika PCT mivarotra, Araka ny nampanantenainay, ny pentan'ny PCT fanafody isan-karazany dia madio tsy latsaky ny 98%.
Ny tsimok'aretina PCT dia midika ho fanafody ho an'ny fitsaboana amin'ny serasera. Ny fitsaboana amin'ny serasera dia fomba iray amin'ny fampiasana zava-mahadomelina izay miasa amin'ny alàlan'ny rafitra isan-karazany handehanana miezaka ny hampiato ny hormonina ampiasain'ny mpampiasa indray mandeha amin'ny ara-dalàna raha vao tapitra ny fitsaboana anteriora anabolic androgenic.
Raha vantany vao nitsahatra ny fampiasana ny steroids anabolic anaboliana dia navela tao amin'ny toe-javatra iray izay namafazana ny famokarana testosterone voajanahary, indraindray mafy. Ankoatra izany, ny halatra amin'ny steroïde dia mihena lalandava eo amin'ny tontolony, mamela ny mpampiasa amin'ny diabolikan'ny tosi-drà goavam-be, izay mety hitaratra amin'ny fahafahany mihazona ny volan'ny tazomoka amin'ny ankapobeny. Noho izany dia mora ny mamintina fa tiantsika ny hahita fomba hamerenana ny famokarana testosterone voajanahary mba hitondra tontolo iainana tsara kokoa ho an'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ary hitazonana ny tazomoka.
Ny citrate Clomiphene (paompy clomid) sy tamoxifen (ny voanjo nolvadex) dia azo ampiasaina amin'ny tsingerin'ny dipoavatra mba hanamafisana ny famokarana testosteron voajanahary. Satria ny roa dia afaka manakana ny estrogen amin'ny hypothalamus sy ny pituitary, ka hampitsahatra ny fihanaky ny fanavakavahana, dia manana zava-mahadomelina isika izay afaka mampitombo ny FSH (follicle hendrentsika hormonina) sy ny LH (luteinizing hormone) ao amin'ny vatana. Ny fampiakarana ny LH dia afaka manampy amin'ny famporisihana ny sela Leydig amin'ny fitsapana hamokarana testosterone bebe kokoa.
Maro no mahita fa ny leoparda nolvadex ihany no ampiasainy mba hahasitrana azy ireo. Ny sasany, ohatra, dia aleony mampiasa zava-mahadomelina roa mba hanararaotra ny lafiny rehetra. Tsara ny manamarika fa ny molekiola nolvadex dia manjary lalina kokoa amin'ny fanentanana ny fampitomboana ny LH, amin'ny miligramrama eo amin'ny fomba fijery miligrama, raha oharina amin'ny vovoka clomid. Mpampiasa maro koa no mitaraina momba ny voka-dratsin'ny tsimokaretina clomid toy ny fiantraikany amin'ny maso sy ny fikorontanan'ny fihetseham-po.
Dosages of nolvadex ho an'ny protocol PCT:
Andro 1 100mg
Taorian'ny 10 andro 60mg
Taorian'ny 10 andro 40mg
Ny voalaza etsy ambony dia protocole iray samihafa azo ampiasaina. Mazava ho azy fa mety hampiova ny dosages sy ny faharetan'ny protocola mandritra ny dingana manaraka ny fiovan'ny toetr'andro sy ny hafa.
Araka ny voalaza etsy ambony dia maro ireo mpampiasa dia te hampiasa ny rivodom-pasika napvadex sy clomid ho an'ny rehetra.
Ny dodea avy amin'ny vovoka nolvadex sy ny poety clomid ho an'ny protocol PCT:
Andro 1 Clomid poids 250mg + Nolvadex poids 60mg
Taorian'ny 10 andro Clomid poids 100mg + Nolvadex poids 40mg
Taorian'ny 10 andro Clomid poids 50mg + Nolvadex poids 20mg
Io fomba io dia tokony handaitra. Izany dia milaza, tahaka ny amin'ny protocola nolvadex fotsiny, tsy vita amin'ny vato. Mety hisy dingana avo kokoa hitera-pahazavana bebe kokoa na fampiasana maharitra mba hampisy ny vokatra iriana.
Rehefa manomboka ny protocol PCT dia miankina amin'ny fitantanana izay voatantana ao anatin'ilay tsingerina. Jereo ny steroids rehetra nampiasainao nandritra ny diarinao teo amin'ny tabilao etsy ambany, ary jereo tsara ny zava-mahadomelina izay manana ny daty lava lava indrindra aorian'ny fiantsoana farany. Izany no tsy hanombohantsika ny protocol PCT raha mety mbola mety ho marim-pototra ny androgens ao anatin'ny rafitra, izay mety hahatonga ny PCT ho fako mandra-pivoaran'ny sehatra.
Nahoana no ampiasaina ho vatana ny vatan'ny bakteria?
Ny volo clomid dia anarana mahazatra ho an'ny Clomiphene Citrate ary dia estrogen synthetic. Voan'ny aretin-tsika izy io mba hanampiana ny ovul amin'ny fambolena tsy fahampian-tsakafo. Serufene ny anaran'ny iray hafa.
Ny ankamaroan'ny steroid anabolic, indrindra ny androgens, dia miteraka ny fanamafisana ny famokarana testosterone manokana. Rehefa miala amin'ny tsingerin'ny tsiranoka ny bakteria iray, dia mihena ny famokarana voajanahary voajanahary ary mihena ny halatr'ireo steroidinina nalaina tao amin'ny rà. Izany dia mametraka ny ratios of catabolic: hormones anabolic in the blood, hence the body is in a condition of catabolism, and, consequently, much of the muscle tissue that has been achieved on the cycle is now going to be lost.
Ny AASraw dia manome karazana vovony mangatsiaka varo-pandehan'ny PCT, Tamoxifen Citrate / Nolvadex, Clomiphene citrate / Clomid poids, Exemestane / Aromasin, Fluoxymesterone / Halotestin, Anastrozole / Arimidex ary Letrozole / Femara. Azonao atao ny mandray ireo akora fototra avy any AASraw mba hiarovana ny fahasalamanao.